Archives andinin-tsoratra masina - Fanisana ny fanjakana
Category Archives: Soratra Masina
Andinin-tsoratra masina - Raha tsy manana fitiavana aho
Amin'ny fitiavana na fitoraham-bato…
Andro telo maizina
Faminaniana azo itokisana ve izany?
Soratra Masina - Nosedraina
… Ary nahita tsy fahita.
Soratra Masina - Amin'ny famoahana hevitra
Tsy azontsika atao ny mampandona ny fahamarinana.
Fa Andriamanitra tsy nanome fanahy ratsy anay, fa hery sy fitiavana ary fifehezan-tena.
Soratra Masina - Kominista vs Fiantrana
Amin'ny tantara isika dia miatrika ady ary mangatsiaka-dronono amin'ny tanjona…
Andininy - Manorotoro ny Voahosotr'Andriamanitra
Ny andrianan'ny tany dia nitsangana hanohitra ny voahosony.
Soratra Masina - Ny Mpaminany Lazaina
Hitan'izy ireo fa lehilahy tsy mahay izy ireo, olon-tsotra…
Soratra Masina - ahoana ny fomba hinoana!
Mahagaga ny fo tsy mino izay rehetra nolazain'ireo mpaminany!
Soratra Masina - Vonjeo ny tenanao
Mibebaha, ary ataovy batisa, amin'ny anaran'i Jesoa Kristy.
1 2 Manaraka "
Léandre Lachance - Vetivety dia hitroatra ny fanjakako
Ny vatana, mamaky
Pedro - Ho avy mikorontana sy mizarazara
Medjugorje: Te-ady sy fankahalana i Satana
antikristy Fivadiham-pinoana Malagasy fiangonana katolika famaizana Chastisements fiangonana kominisma fifanjevoana fiovam-po Coronavirus Covidien-19 division Ny fandriam-pahalemana Eokaristia finoana tahotra Fr. Michel Fahazavana momba ny feon'ny fieritreretana Mametaveta ny fo Jesosy Toniam-pampianaran'ny Mary New World Order Ilay Reninay fanenjehana Fiarovana ara-batana Papa vavaka fisoronana faminaniana fanadiovana fialofana fibebahana sapile fisarahana Soratra Masina Fiarovana ara-panahy fitsapana fahoriana Triumph fahatokiana fahamarinana ady fampitandremana